China Runjin © Krunt ™ -2000 Mkpụrụ igwe Na-agwakọta Igwe na rụpụta | Runchen
Tinye granule a mịrị amị, granule shuga ma ọ bụ granule mmiri n'ime ice cream. (ngwaọrụ ahụ adịghị adabara maka ihe viscous, yana ndị na-adọrọ ngwa ngwa ma ọ bụ dị mfe ịnwe adsorbed)
Mkpụrụ ahụ na-eme ka ihe nkedo dị iche iche iji gosipụta nsogbu dị iche iche ma rụọ ọrụ nke ọma ma gbakwunye na ice cream site na mgbapụta vane, nke na-agwakọta granul na ice cream slurry site na igwekota ihe na-arụ ọrụ mgbe niile. A na-edozi mgbapụta nri Vane site na potentiometer.
MkpụrụNwachukwu-2000 bụ Mkpụrụ Granule Nri ma na-egbo mkpa nke ịdị ọcha nri n'ụzọ zuru oke. Akụrụngwa a nwere nnukwu igwe na-ekpo ọkụ na akụkụ dị elu, nke ezubere iji gbochie ụkpụrụ ịdị ọcha, ntụkwasị obi na ogologo oge. Akụkụ niile na-akpọ ice cream bụ nke igwe anaghị agba nchara 304. A kwadebere ya na ndị nkedo, dị mfe ịkwaga ma wụnye.
Hopper na iko iko
Na hopper, enwere ngwaọrụ agwakọta iji hụ na ịghasa ọnụọgụ nwere ike ịkwado mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi. Quantgha ọnụọgụ nwere ike ịzụ mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi na ntinye nke mgbapụta nri vane. Enwere ike gbanwee ọsọ nke ọnụọgụ ọnụọgụ n'etiti 0% na 100%.
The nri mgbapụta mejupụtara nke mbanye wiil nke agụba na ike uniformly mix mkpụrụ granule n'ime ice ude slurry atara si aga n'ihu usoro kefriza igwe. N'oge ntụgharị nke agụba, ọ nwere ike mechie ọnụ ụzọ mbata nke mkpụrụ osisi slurry, nke mere na a na-ekewapụta ice cream slurry site na ikuku gburugburu. N'oge mgbasa na adiana nke draịva mbanye, mgbe agụba rutere ice ude slurry, ọ ga-akpaghị aka ichighaazu azụ n'ime draịva wiil, na n'otu oge ahụ, ma debe mkpụrụ mkpụrụ osisi ala. Enwere ike ịme usoro a nwere ike ịgba ọsọ maka ịgba ọsọ nke wiilị na-agba ọsọ site na ike
Ọrụ nke igwe na-agwakọta mkpụrụ osisi
Ọ dị ezigbo mma ma nwee ike rụọ ọrụ ozugbo ike gbanyere ike.
Ọrụ maka ogwe ọrụ nwere ike ịmalite ịmalite usoro nhicha CIP na-akpaghị aka, nke mere na mgbapụta nri na akụkụ agwakọta nwere ike gbanwee na nhazi nke nrụpụta n'oge ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, wee kwado mbugharị nke ịgwakọta ngwaọrụ na ịghasa ọnụọgụ, iji buru wepụ akwụkwọ nhicha.
Ikike itinye mkpụrụ
Site na nhọrọ nke dị iche iche quantitative ịghasa, MkpụrụNwachukwu-2000 nwere ike mepụta 8 ～ 200L / hour Efrata ọ bụla ogbe.
Ọzọ akụkụ ahụ mapụtara
Motorgwakọta moto 0,75 KW
Vane mgbapụta moto 1.1 KW
Nri tube, externally 51 mm 2 "Hoop
Igbapụta tube, externally 51 mm 2 "Hoop
Nke gara aga: Runjin © Krunt ™ -RM35 Igwe Friiz